भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ ११ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २५ तारिख – SUDUR MEDIA
May 24, 2021 AdminLeaveaComment on भोलिको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ ११ गते मंगलबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २५ तारिख
भोलि मिति २०७८ साल जेठ ११ गते मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ मे २५ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । बैसाख शुक्लपक्ष । तिथि–चतुर्दशी,३६ घडी ४४ पला, बेलुकी ०७ बजेर ५४ मिनेट उप्रान्त पूर्णिमा । नक्षत्र–स्वाती,०२ घडी ११ पला, बिहान ०६ बजेर ०५ मिनेट उप्रान्त विशाखा । योग– वरियान, ०३ घडी २३ पला, बिहान ०६ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त परिध,रातको ०३ बजेर ३० मिनेट उप्रान्त शिव । करण–गर, बिहान ०९ बजेर ०७ मिनेट उप्रान्त वणिज,बेलुकी ०७ बजेर ५४ मिनेट उप्रान्त भद्रा । आनन्दादिमा–ध्वज योग । चन्द्रराशि–तुला ,बेलुकी १० बजेर ५० मिनेट उप्रान्त बृश्चिक । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर १२ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५० मिनेट । दिनमान ३३ घडी ०४ पला ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । बिधिन्न भौतिक तथा बिलाशि बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन लोभ्याउँन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मेहनेत गरे भन्दा राम्रो नतिजा हात लाग्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । समयमा काम बन्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
मेष (चू ,चे, चो, ला, लि, लू, ले, लो,अ) कामहरु समयमा नबन्ने तथा आर्थिक ब्याबस्थापन गर्न गाह्रो भएको महशुष हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुनै हाबि हुनालेनतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । खोज अनुशन्धानको क्षेत्रमा समय लगानि गरेपनि भनेजस्तो सफलता पाउँन निकै मेहनेत गर्नुपर्नेछ । मंगलबार बेलुकिबाट परिस्थितिमा केहि मात्रामा सुधार आई धार्मिक तथा लामो दुरिको शैक्षिक यात्रा हुनेछ । धार्मिक अनुष्ठान तथा मन्दिरतिरको यात्रा हुने तथा टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आत्मिय मित्रतथा साथिभाईहरुबाट उत्साहजनक सहयोग प्राप्त हुनेछ । शुक्रबार बिहानबाट ब्यापार ब्याबसायमा प्रशस्त लगानि गरि भनेजस्तो नाफा कमाउँन सकिनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा गरिरहेको काममा बढुवा हुने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । पदिय दायित्व बढ्ने तथा निर्णय क्षमतामा बृद्धि भई तपाईबाट समाजका पक्षमा राम्रा तथा सकारात्मक निर्णयहरु हुने हुदा मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ भने परिवारिक जमघटमा सामेल भई स्वादिष्ट भोजनका साथ रम्न सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ, वा, वी, वू, वे, वा) आईतबार, सोमबार तथा मंगलबार बेलुका सम्मको समय उत्तम रहेको छ । ब्यापार ब्याबसायमा प्रशस्त लगानि गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । लामो दुरिको ब्यापारिक तथा मनोरञ्जनात्मक यात्रा हुनेछ । अध्यान अध्यापनमा सुधार भई अरु भन्दा अग्र पंत्तिमा आउँन सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा रमाउँने समय रहेकोछ भने माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ । मंगलबार बेलुकाबाट घर परिवारमा घरायसि कुरामा सामान्य समस्या बढ्ने तथा दिदिबहिनिसँग सैद्धान्तिक बिषयमा राय बाजिनेछ । ब्यापार ब्याबसायमा अलि बढि समय लगानि गर्दा भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । सामाजिक कामहरु गर्दा ख्याल गर्नुहोला मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोला यात्राका क्रममा बिभिन्न बाधा अवरोधहरु हुन सक्छ । साथिभाईको गलत संगत तथा सल्लाहदेखि ख्याल गर्नुहोला फसाएर फरार हुन सक्छन् ।
मिथुन (का, की, कू ,घ, ङ, छ ,के,को,हा) समग्रमा मिथुन रासि हुनेहरुका लागि यो साता राम्रो रहेको छ । बादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई पाखा लगाउँदै सकारात्मक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । न्यालय तथा अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । पढाई लेखाईमा सुधार भएर जाने तथा खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा तपाईकै बर्चश्व रहनेछ । यो साता आफुले मन पराएको मानिस सँग रमाईलो यात्रा हुने तथा यात्राको क्रममा मनमोहक दृष्यहरुको अवलोकन गर्न सकिनेछ । ब्यापार ब्याबसायमा थोरै समय लगानि गर्दा पनि भने जस्तो आम्दानि हुने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । मांगलिक तथा बैवाहिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ साता कटाउँन सकिनेछ । शुक्रबार बिहानदेखि समय परिवर्तन हुने हुनालेखानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि पुरानो समस्या बल्झन सक्छ । आर्थिक अभाबले हातमा आई सकेको काम अरुलेनै फुत्काउँने हुदा मानसिक तनाब हुनेछ भने स्थिर सम्पति तथा धनमाल हराउँन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही, हू ,हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो) यो साता कर्कट रासि हुनेहरुलाई शुरुको केहि दिन आफुले भनेजस्तो हुने छैन । अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्र तपाई आफ्नै कारणले कमजोर रहनेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या बढ्ने हुनाले दैनिक काम गर्न गाह्रो महशुस हुनेछ । मंगलबार बेलुकाबाट समयमा सुधार आई मामा तथा मावलि पक्षबाट तपाईको काममा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । प्रतिश्पर्धाको संघर्षमा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । ब्यापार बिश्तारका सवालमा साझेदारहरुसँग रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । जीवन साथिबाट तपाईको काममा भरपुर सहयोग हुने हुनालेदैनिकी स्वत स्फुर्त अगाडि बढ्नेछ । बैवाहिक तथा भनभोज कार्यक्रममा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । समाजमा सम्मानित काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिने समय रहेकोछ ।
सिहं (मा, मी, मू , मे, मो, टा, टी, टू ,टे) समय मध्यम रहेको छ । साथिभाईहरुको गलत संगतले नकरात्मक सोचको बिकास हुनेछ भने नियम बिपरित काम गर्न उक्साउने हरु सक्रिय रहनेछन् । घर जग्गा तथा गाडि घोडाको ब्याबसायबाट केहिमात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन ब्याबसाय भने फस्टायर जानेछ । मित्रहरुको लहै लहैमा लाग्नाले पढाई लेखाई कमजोर रहनेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आई दैनिक काम गर्न अप्ठ्यारो महशुष हुनेछ । भौतिक सम्पति हरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । शुक्रबार बिहानबाट समय तपाईकै पक्षमा रहनाले थाति रहेका कामहरु सम्पन्न हुनेछन् । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनालेखोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा नयाँपनको बिकास गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाई आफ्नै पक्षमा हुनेछन् भने प्रतिश्पर्धिहरु आफै किनारा लाग्नेछन् ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) बादबिवाद तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईकै जित हुनेछ भने न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । सार्वजनिक महत्वको बिषय उठान गर्दा दाजुभाई तथा छिमेकिसँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्दा कामहरु समयमानै फत्ते हुनेछन् । आत्मिय मित्र तथा आफन्तको साथमा छोटो तथा रमाईलो यात्राको क्रममा नयाँ नयाँ दृष्यहरुलाई कैद गर्न सकिनेछ । प्रेम प्रशङगमा रमाउने समय रहेको छ भने एक आपसमा भेटघाट गरि मिठा मिठा कुरा गरि दिन बिताउन सकिनेछ । घरजग्गा तथा सवारि साधनको कारोबारबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । समाजको पक्षका कामगरि सम्मानित जीवन ब्यातित गर्न सकिनेछ । साथिभाई तथा शुभतिन्तकबाट तपाईले चाल्ने हरेक पाईलामा साथ पाईने हुनालेगन्तब्य पहिल्याउँन सहज हुनेछ । शुक्रबार बिहानदेखि समय परिवर्तन भई पढाई लेखाईमा अरुभन्दा पछि परिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्याहरु बल्झने हुनालेखानपान तथा बाहिरि बाताबरणको ध्यान दिनुहोला । अप्रिय घट्ना तथा समाचार सुनिने हुदा मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ ।
तुला ( रा, री रु, रे, रो, ता, ती, तू ,त) समग्रमा यो साता साम्रो रहेकोले नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताब आउँनेछ भने आर्थिक ब्याबस्थापनका मुद्दाहरु सजिलै हल गर्न सकिनेछ । कन्भिन्स गर्ने पावर बढ्ने हुनालेअरुलाई सजिलै प्रभावमा पारेर काम लिन सकिनेछ । कलात्मक तथा सिर्जनात्मक कामबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ भने गित संगित तथा चलचित्र क्षेत्रमा समय दिनेहरुका लागि फरक बिषयबस्तुमा भुमिका निर्बाह गर्नु पर्ने हुनसक्छ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा थोरै समय लगानि गर्दानि उत्कृष्ट नतिजा आउँदा खुसिले उँचाई नाघ्नेछ । दाजुभाई तथा छिमेकको सहकार्यमा नौलो प्रकृतिको काम गर्ने अवसर जुर्ने तथा सकारात्मक परिणाम आउँने हुनाले समाजमा नाम कमाउँन सकिनेछ । शुक्रबार बिहानबाट घर जग्गा तथा सवारि साधनको कारोबार गर्दैहुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोला घाटा लाग्ने योग रहेकोछ । कृषि तथा पशुपालन ब्याबसायलाई आधुनिकिकरण गरेर प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा अलि बढि समय लगानि गरेमात्र जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नी, नू ,ने, नो, या,यी, यू) बृष्चिक रासि हुने हरुको लागि यो साता उत्तम रहेकोछ । कला साहित्य तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा लगानि गर्ने अनुकुल बाताबरण बनेर जानेछ । पढाई लेखाईमा अरुलाई निकै पछाडि पारि अगाडि बढ्न सकिनेछ भने प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराई अगाडि जान सकिने हुनालेआफन्तहरु खुसि हुनेछन् । समय अनुसार आफ्ना बिषय बस्तुको उँठान गर्न सकिने हुनालेआर्थिक रुपमा सम्पन्न होईनेछ । समाजसेवामा जनताको साथ रहने तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति रहनेछ । सुन्दर तथा बिलाशि बस्तुहरुको उपभोग गर्न पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । शुभ तथा मांगलिक सभा समारोहमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन गर्दै समय कटाउँन सकिनेछ । दाजुभाई तथा ईष्टमित्रहरु तपाईले शुरु गरेको काममा सहयोग गर्न ईच्छा तथा आकांक्ष देखाउँनेछन् । छोटो तथा महत्वपुर्ण यात्राको तय हुनेछ भने सामाजिक तथा सास्कृतिक काममा आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको भनेजस्तो सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
धनु (ये, यो, भा, भी, भू , ध, फा, ढा, भे) बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्यापार ब्याबसायबाट प्रसस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशि उत्पादनमा नाफा कमाउँन अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । मंगलबार बेलुकाबाट नयाँ नयाँ फेसेनेवल समानको प्रयोग गरि अरुको मन आफुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । जोस जागर बढ्ने तथा कलात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यमा मन जानेछ । निर्णय क्षमतामा बृद्धि हुनेछ भने तपाईको सहि निर्णयको प्रभावले समाजमा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । शुक्रबार बिहानबाट बोल्दा तथा कुनैपनि निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुहोला तपाईको आजको निर्णय आत्मघाति पनि हुन सक्छ । तयारि बिनानै महत्वपुर्ण बिषयमा दिईने प्रश्तुतिले कार्यक्षेत्र तथा समाजमा कुनै अर्थ नराख्न सक्छ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पति पत्निबिच बिश्वासको बाताबरण गुम्ने खतरा रहेको छ ध्यान दिनुहोला ।
मकर (भो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, खी, खू,खे, खो, गा, गी) बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराएर अगाडि बढ्न सकिनेछ । बिभिन्न किसिमका मानव निर्मित भौतिक साधनहरु लाभ हुनेछन् । प्रेम प्रशङगले साता रमाईलोका साथ बित्नेछ । ईच्छा,आकाक्षा तथा मनोकामना हरु पुरा हुने समय रहेको छ । अधुरा कामहरु पूरा हुनुका साथै नयाँ कामका अवसर आउनेछन् । मंगलबार बेलुकिबाट बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्यापार ब्याबसायबाट प्रसस्त आम्दानि हुनेछ भने स्वदेशि उत्पादनमा नाफा कमाउँन अलि बढि समय खर्चनु पर्नेछ । लामो दुरिको बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ । शुक्रबार बिहानबाट राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिश्ठामा बृद्धि भएर जानेछ भने महत्वपुर्ण जिम्मेवारि सम्पादन गर्ने जिम्मा तपाईको काँधमा आउनेछ । कला,साहित्य तथा नृत्य प्रतियोगितामा सहभागि भई प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराई नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिने हुनालेआफन्त तथा साथिभाईहरु खुसि हुनेछन् ।
कुम्भ (गू , गे , गो, सा, सी, सू , से, सो, दा) यो साता कार्य सम्पादन गर्ने सवालमा समाजका अग्रज तथा बिशिष्ट ब्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा बढुवा हुने योग रहेको छ । निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएर जाने तथा कार्यालयमा तपाईको निर्णय क्षमताको उच्च कदर हुनेछ । वादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराएर नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन ब्याबसायबाट राम्रै आम्दानि हुनेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ । गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ भने बिद्यामा तपाई अब्बल साबित हुनुहुनेछ । पारिवारिक जमघटमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । शुक्रबार बिहानबाट बिदेशि भाषा तथा टेक्निकल बिषयसँग सम्बन्धित कामहरु बाट मनग्गे रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ । बैदेशिक यात्रा तथा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने हुदा खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची) आईतबार, सोमबार तथा मंगलबार बेलुकिसम्मको समय मध्यम रहेकोछ । काम गर्ने सवालमा बिभिन्न किसिमका बाधा तथा अवरोधहरुको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ । सामाजिक काम गर्ने सवालमा कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने हुनालेमान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा कमिको महशुस हुनेछ । शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राका क्रममा प्रभावशालि ब्याक्तिहरु सँग भेटघाट भएपनि तपाईले प्रस्तुत गर्नु भएको योजनाको खुलेरै आलोचना गर्नेछन् । मंगलबार बेलुकिबाट समय तपाईकै पक्षमा आई ब्पापार ब्याबसायमा लगानि बढाएर प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । राजनितिकर्मी तथा समाजसेवीहरुले जनताको काम गरेर प्रसिद्धि कमाउँने समय रहेको छ भने अरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो काम फत्ते गर्न सकिनेछ । सम्मानित काम गरेर समाजमा नाम,दाम तथा ईज्जत प्रतिष्ठा कमाउँन सकिनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा गरिरहेको काममा बढुवा हुने योग रहेको छ । बिभिन्न किसिमका भौतिक साधनहरु लाभ हुनेछन् भने प्रेम प्रशङगले साता रमाईलोका साथ बित्नेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस ।
लब्ली डाँडामा प्रहरी पुग्दा देखियो नसोंचेको दृश्य, भयो भा’गाभा’ग ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
बि’रामी निको पार्ने भाइरल झाँक्री उफ्रिँदा उफ्रिँदै आफै ढले, हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा अस्पताल लगियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)